UCarrie Fisher. Inkosazana, umbhali wesikrini kunye nombhali. | Uncwadi lwangoku
UCarrie Fisher. Inkosazana, umbhali wesikrini kunye nombhali.
Iincwadi zikaCarrie Fisher
UCarrie Fisher usweleke ngoLwesibini odlulileyo we-27 kwiveki ephelileyo enyakeni kumculo nakwimiboniso bhanyabhanya. Unina, umdlali weqonga Debbie Reynolds, akazange ayifumane ilahleko yakhe kwaye wemka naye kuphela emva kosuku. Uqhushululu kunye noqhwithela ubuntu UCarrie Fisher wayenjalo ephawulwe yimpumelelo yeplanethi oko kukunike ongenakulibaleka inkosazana uLeia usemncinci kakhulu. Ikwalungiselele ubudlelwane nonina.
Ngeengxaki zotywala neziyobisi, iincwadi zakhe zobomi Ukuxolisa okanye ukoyisa iziporho kunye nobuthathaka obunokumnceda. Kodwa oko kuvuza akuzange kuthintele ukunyamalala kwakhe okungalindelekanga. Ngokuqinisekileyo iincwadi zakho aziyi kuba nde ukuba ipapashwe ngeSpanish. Sigxininisa le nkalo yoncwadi ngerhafu encinci kwimemori yakhe.
UCarrie Fisher Ndisandula ukuveza incwadi yakhe yamva nje, Inkosazana diarist, eLondon. Kwinqwelomoya ebuyela eUnited States ngoDisemba 23 wahlaselwa yintliziyo andinakoyisa. Umhlaba webhanyabhanya kunye nezigidi zabalandeli bobona buntu bakhe buye bothuka.
Fisher yaphawulwa yinkosazana engafiyo ye Idabi leenkwenkwezi Kwaye, ngaphandle kokuthatha inxaxheba kwiimovie ezininzi, uhlala phantsi komthunzi wawo. Ukongezwa kuloo nto yayiyimpikiswano kunye nobuntu obuthethileyo, owagcina ephethwe yintsholongwane. Enye indlela yokulwa iziyobisi kunye neengxaki ukubhala.
1 Amakhadi eposi avela kwi-Edge (1987)
2 Ukulahlekwa kukaMakhulu (1993)
3 Ukusela okunqwenelekayo (2008)
4 I-princess diarist (2016)
4.1 Ezinye iincwadi
Amakhadi eposi avela kumda (1987)
Incwadana yakhe yokuqala kunye nencwadi yakhe eyaziwa kakhulu Enkosi kwi Ukulungiswa kwefilimu Yenziwa ngumlawuli uMike Nichols ngo-1990. Ibalisa ibali lomdlali weqonga, onenkqubo yakhe yokuvuselela iziyobisi kubandakanya ukugcina iphepha kunye nokuthumela iiposikhadi kubathandekayo bakhe. Ineenkwenkwezi UMeryl Streep kunye noShirley MacLaine. Kwangelo xesha, kwaboniswa ukuba obona buso bungenabuntu ehlabathini lokuzonwabisa kunye nomdlalo bhanyabhanya ngakumbi nefuthe.
Ukulahlekiswa kukaMakhulu (1993)
UFisher wawusingatha umcimbi we ukubeleka. Usebenzisa i-ego yakhe eguqukayo yombhali wescreen ogama linguCora, uxela ngokoyikeka okukhulu kokuba umlinganiswa ophambili akhule ngokufa xa ebeleka. Inoveli yi iileta ukusuka kuCora ukuya kumntwana wakhe ongekazalwa apho abalisa ngobomi bakhe.
Ukusela okunqwenelekayo (2008)
Ulungelelwaniso yomboniso wakhe weTV (Wavuma nomama wakhe kuloo nto), uFisher watyhila ukuba kwakunjani ukukhula usithi wazalwa kwenye yeebhokhwe ezinde e-Hollywood. Kwaye wakhula njani kwakamsinya kwimovie ethobekileyo ebizwa Idabi leenkwenkwezi. Ngethoni esondeleyo njengokuba ihlekisa, uFisher ujonga ubomi bakhe bhanyabhanya.
Le ncwadi yalandelwa yenye, Uthutho, kwi-2011, apho athetha khona ngeyakhe Ukuxhuzula. Ngoburharha phakathi kokungafihlisi kunye nokuzikhusela, uxelela indlela Unyango lwe-electroshock Baye bamnceda ukuba boyise ukudakumba kwakhe, kodwa bayishiya ingqondo yakhe igcwele imingxunya. Wayefuna ukuwabhala phantsi loo mava elindele ukuba angawalibala.
Inkosazana diarist (2016)
Ipapashwe ngo-Novemba ophelileyo, le ncwadi yingqokelela ii-anecdotes ukuba uCarrie Fisher uchonge kwifayile ye- idayari yakho malunga nokufayilwa kwe-movie yokuqala de Idabi leenkwenkwezi. Kubhalwe ngetoni enikwa kuphela lulutsha kwiminyaka yakhe ye-19, xa uFisher wazifumanayo wayengaziwa kula maphepha azele amanqaku, izichasiselo kunye nemibongo emincinci. Ukoyiswa yimvakalelo yokuba kwiseti, kwaye akunakwenzeka ukuba ucinge ukuba kuya kuphelela phi kungekuphela kuye, kodwa kubo bonke abo asebenza nabo.
Eyona ityhila kwaye iqinisekisiwe emva kwayo yonke le minyaka yamahemuhemu: into emfutshane awayenayo noHarrison Ford, uneminyaka elishumi nane ubudala, sele etshatile kwaye enabantwana ababini. Kodwa ayikho enye into eyenzelwe abo bafuna izithiyelo. Uphengululo lubonisa indlela incwadi ebonisa ngayo i icon engama-60 ubudala ojonga ngasemva kweyakhe Ukuziphatha kakubi kwi-19 kwaye yabuchaphazela njani ubomi bakhe bonke.
Ezinye izihloko zikhona Ukunikezela ngepinki (1990) kunye Eyona nto imbi kakhulu (2004).
Ngapha koko, siphela sikhumbula uFisher kwelinye lamaxesha amaninzi esele ingafi ngumlingo we-cinema. Phumla ngoxolo, nkosazana ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » UCarrie Fisher. Inkosazana, umbhali wesikrini kunye nombhali.